Baaq ku socda Madaxda Maamul Goboleedyadda – Kismaayo , Jubaland – Radio Daljir
Baaq ku socda Madaxda Maamul Goboleedyadda – Kismaayo , Jubaland
Seteembar 3, 2018 4:59 b 0
Waxaan soo dhawaynayaa kalfadhiga Madaxda Gobolada ee ku shiraya Kismaayo.
Waxaan ka codsanayaa Madaxda in shirkooda uu noqdo mid shacabka Somaaliyeed ee tabaalaysan mahdiyaan. In lagu dadaalo xoojinta midnnimadda iyo wada shaqaynta Gobolada iyo dawladda dhexe ee federaalka.
Somaaliya waxay u baahantahay waa NABAD iyo MIDNNIMO si loo helo horumar dhinac waliba ah. Shacabka tabaalaysan 27 ka sano waa ka daalay isqabqabsi, isgarab-yaac iyo nin tooxsi. Shacabka waa ka daalay Mucaarad iyo Mashruuc Shisheeye oo Qaran dumis ah.
Dawladda dhexe waxay nooga baahan tahay
Talo wanaagsan, Toosin halka ay ka liicdo iyo Taageero meesha ay ku wanaagsan tahay.
Sidoo kale, dawladda Federaalka oo uu hoggaaminayo Mudane Farmaajo waxaan ugu baaqayaa inuu soo dhaweeyo Madaxda Gobolada oo uusan sharaysan islamarkaa wax ka qabto cabashadooda haddii ay xaq tahay iyadoo la tixgelinaayo Midnnimadda iyo Badbaadinta Qaranka.
Tawfiiqda Allaha na waafajiyo
Haji Mohamed Yassin.
Shirka Madaxwaynayaasha Dowlad Goboleedyada oo maanta furmaya
Saaka & Dunida iyo Cabdifataax Cumar Geeddi, Daljir Garoowe (dhegayso)